‘स’म्भोग अघि म’हिलाको ९ रु’चिहरु, जुन हरेक पु’रुषले जा’न्नै पर्ने हु’न्छ’ । – Sandesh Press
July 22, 2021 414
से’क्स सम्ब’न्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । तर से’क्स स’म्बन्ध राख्दा महिला र पुरुषको मनमा कस्तो भाव आउँछ भन्ने विषयमा सबैलाई कौतुहलता हुन्छ ।यस विषयमा धेरै अध्यन भएका छन् भने लेख रचना समेत लेखिएका छन् । पछिल्लो पटक गरिएको एक शोधले महिलाले के चाहन्छन् भन्ने विषयमा नयाँ तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।यौ’न विज्ञको सहभागितामा ७०० महिलामा गरिएको अध्यनबाट महिलाहरुले यौ’न स’म्बन्धको बेला के सोंच्छन् भन्ने तथ्य बाहिर आएको हो ।यौ’न क्रि’डामा पुरा ध्यान
महिलाहरु आफ्नो पार्टनरले पुरै ध्यान यौ’न सम्ब’न्धमै देओस भन्ने चाहन्छन् । सर्वेमा सहभागी करिव ४२ प्रतिशत महिलाले आफूलाई ध्यान दिएको महसुस भए पुरुषको प्यार बढी अनुभव हुने बताएका थिए । आँखाको हाउभाउ, मुखको क्रि’याकलाप, चु’म्बन, ओं’ठमा चुम्ब’न वा संवे’दनशील अं’गमा स्प’र्ष यौ’न सम्प’र्कको समयमा महिलालाई मन पर्ने अध्यनको निष्कर्ष छ ।
आन’न्द र सन्तु’ष्टीकिंसले इन्स्टिच्यूटले गरेको शोधमा महिलाले पनि पुरुष जस्तै कण्डो’म नलगाइ यौ’न स’म्पर्क गर्दा बढी सन्तुष्टी हुने बताए । यद्यपी क’ण्डोम लगाउँदा बढी सुरक्षित महसुस हुने उनीहरुको भनाइ थियो ।विस्तारैयौ’न क्रि’डाका लागि हता’रिने पुरुष महिलालाई मन पर्दैन । उनीहरु आफ्ना संवेदन’शील कोमल अं’गमा पुरुषले दुख्ने गरी केही पनि नगरुन् भन्ने चाहन्छन् । संवेद’नशील अं’गसँग संवेदन’शीलरुपमै प्रस्तुत भएको उनीहरुलाई मन पर्छ ।
वातावरणशोधमा सहभागी अधिकाँश महिलाले उपयुक्त मौ’षम वा वातावरण नबने यौ’न आन’न्द लिन नसकिने बताए । चिसो मौषममा चिसा खुट्टा लिएर पुरुष यौ’न क्रि’डा गर्न तयार भएपनि महिलालाई त्यसले गाह्रो हुने उनीहरुको भनाइ थियो । त्यसैगरी गर्मीमा से’क्सको चाहाना र आ’नन्द बढी हुने महिलाको अनुभव छ ।आ’सनको भूमिका
संवे’दनशील अं’गको पहिचानमहिला शरीर आफैमा संवेद’नशील चिज हो । तर पुरुषहरु आफ्नै जस्तो गरेर महिलासँग ब्यवहार गर्छन् । से’क्सको शोधका क्रममा महिलाहरु यो’नीको माथिल्लो भित्री भागमा हुने स्प’टमा स्प’र्ष भए निक्कै छिटो आनन्दित हुने पत्ता लागेको छ । यसका लागि औंलाको प्रयोग महत्वपूर्ण हुन्छ ।थाकेको बेला वा निद्रामा महिला उ’त्तेजित हुँदैनन्पुरुषहरु अधिकाँश समय यौ’नका लागि तयार रहेपनि महिलाको अलि फरक हुन्छ । उनीहरु थाकेको बेला वा निद्राको बेला उत्ते’जित हुने सम्भावना निक्कै कम हुन्छ । त्यस्तै उनीहरु थाकेको बेला यौ’न आन’न्दमा पुर्याउँछु भन्नु पनि मु’र्खता हुन्छ।
Prevके दुबईमा सलमान खानको १७ वर्षीको छोरी छ ? दुबईमा सलमान खानकी श्रीमती र एक छोरी रहेको दाबी! सलमान खान लाई आयो यस्तो आरोप
Nextफेरी कु’ टिए अर्का पठाओका चालक, यातायात व्यावसायीले पठाओ चालकमाथि गरे निर्घात कु टपि ट